I-Queen City Suite | I-Private Ste w/2 Imibhede yeNdlovukazi
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Jason
Siyakwamukela ku-Queen City Suite! Igumbi elingaphansi elihlanzekile nelibanzi elinendawo yokungena yangasese, elikhelwe buthule endaweni yase-MoRA e-Charlotte, NC. I-QC Suite inikeza ukufinyelela okusheshayo e-Uptown, e-SouthPark, e-Matthews, nasezindaweni eziningi ezikhangayo ezidumile zika-Charlotte, amakhefi, nezindawo zokudlela. Ngaphezu kwalokho, izindawo zokuhlala zikanokusho ze-Queen City Suite, indawo yokupaka eyanele, kanye nobumfihlo kuyenza ibe INDAWO oyikhethayo lapho uvakashela e-Charlotte!
Le suite yezivakashi yangasese, etholakala ngezansi futhi exhunywe endaweni yethu yokuhlala eyinhloko, inamakamelo okulala amakhulu angu-2 agcwele ukukhanya kwemvelo; Igumbi lokugezela eli-1 eligcwele eliyize elikhulu; igumbi lokuphumula elivulekile elinosofa, isihlalo, ne-TV; kanye nendawo yasekhishini efakwe isiqandisi esiwusayizi ogcwele, umenzi wekhofi wase-Keurig, itafula lebhara, kanye ne-microwave. I-suite iyindawo enhle enokuthinta okuningi okufudumele ukuyenza izwakale sengathi awukaze uhambe ekhaya. I-driveway yezivakashi yenza ukupaka kube lula kuwe ukuthi ufike futhi uhambe ngokuthanda kwakho. Phakathi nokuvakasha kwakho, jabulela ama-TV amabili, i-WiFi yamahhala, izincwadi, imidlalo yebhodi, ikhofi/itiye, nokudla okulula.
I-QC Suite itholakala emizuzwini embalwa kuyo yonke into oyidingayo (igrosa, ukudla, ukuyothenga, njll.), kuyilapho itholakala endaweni encane, ethule, nenezihlahla. Indawo ibheke endaweni eyihekthare enguhhafu evamise ukugcwala izinyoni nezilwane zasendle eziningi. Jabulela ukuhambahamba uzungeze umakhelwane noma emapaki amaningi endawo kanye nemigwaqo eluhlaza eseduze.
Sizotholakala ngokuningi noma okuncane ngendlela ongathanda ukuthi sitholakale ngayo. Sifuna uzizwe wamukelekile futhi ukhululekile, kuyilapho uhlonipha ubumfihlo bakho nendawo. Phakathi nesonto, omunye wethu usebenza kakhulu ekhaya, kanti omunye uzohamba ekuseni futhi abuye ngemva kosuku. Ngempelasonto, sizongena/siphume njengoba kudingeka. Siyakujabulela ukuvakashela amabhizinisi endawo akwa-Charlotte futhi singakujabulela ukwenza noma yiziphi izincomo zokudla/izindawo okufanele uhambe nazo.
Sizotholakala ngokuningi noma okuncane ngendlela ongathanda ukuthi sitholakale ngayo. Sifuna uzizwe wamukelekile futhi ukhululekile, kuyilapho uhlonipha ubumfihlo bakho nendawo. Ph…